သူတော်ကောင်း၏ဆုတောင်းမှု (၁) - ဖွတျသနျးခဲ့သော ဘဝပုံရိပျမြား
Home » တရားဒသေနာ » သူတော်ကောင်း၏ဆုတောင်းမှု (၁)
”သို့ဖြစ်၍ သင်တို့အချင်းချင်း မိမိတို့၏အပြစ်များကို ဖော်ပြဝန်ခံ၍ အချင်းချင်းအတွက် ဆုတောင်း သဖြင့် သင်တို့၏ရောဂါများပျောက်ကင်းလိမ့်မည်။
သူတော်ကောင်း၏ ဆုတောင်ပဌါနာ အလွန်တန်ခိုးပါ၏။ ဧလိယသည် ငါတို့နည်း တူသာမန် လူသားဖြစ်ပေသည်။ သူသည် မိုးမရွာစေရန် စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆုတောင်းသောအခါ ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ သုံးနှစ်နှင့်ခြောက်လတိုင်တိုင်
မိုးမရွာဘဲနေ၏။ နောက်တဖန်ဧလိယဆုတောင်းသောအခါ ကောင်းကင်မှမိုးများရွာချလာ သဖြင့် မြေဆီလွှာသည် အသီးအနှံများကို ဖြစ်ထွန်းစေ၏။ (ယာ ၅း၁၆-၁၈)”
ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်လျှင် ဒုက္ခအလယ်၌ဆုတောင်း ခဲ့ချိန်နှင့် ရရှိသော အဖြေများအနက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသောအချိန် ဟူ၍တွေ့ရသည်။ တဖန်နာမကျန်းသော မိတ်ဆွေများ အတွက် အတူတကွ ဆုတောင်းကြ သည့်နည်းတူ မျှော်လင့်ချက်မဲ့သောအခြေမှ ကျန်းမာသူများအတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသည့်အချိန်လည်း ရှိခဲ့သည်။
ဟေဗြဲ ၁၁ တွင် ကျွန်ုပ်တို့သတိပေးထားသည်မှာ ”ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သော အရာတို့ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏။ မဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုသိမှတ် စွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ တဖန် ယုံကြည်ခြင်း မရှိလျှင် ဘုရားသခင် ၏စိတ်တော်နှင့် မတွေ့နိုင်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်သောသူသည် ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်း၊ ကိုယ်တော်ကိုရှာသောသူကား အကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်း ယုံကြည်ရမည်” (ဟေဗြဲ ၁၁း၆) ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ယုံကြည်ခြင်းကို ကွဲပြားပြဆိုရာတွင် ”ဇာတိယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဝိညာဉ် ယုံကြည်ခြင်း” ဟူ၍နှစ်မျိုးတွေ့ရပြီး၊ ဇာတိယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တွေးခေါ်ချက် နှင့်ကိုက်ညီ နေသရွေ့ဘုရားစကားကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နိုင်သည်။ ထိုယုံကြည်ခြင်း ကားဘဝ အသက်တာတွင် ပြောင်းလဲလာစေရန် အစွမ်းသတ္တိမရှိ။ အခြားဘက်မှ ကြည့်လျှင်”ဝိညာဉ် ယုံကြည်ခြင်း” သည်ကားကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးအခေါ်အယူ အဆတို့နှင့်မကိုက်ညီ သော်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားနှင့် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးကိုယုံကြည် ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာတွင်အံ့သြဖွယ်ရာတန်ခိုးနိမိတ်လက္ခဏာများကိုဒိဋ္ဌကိုယ်တွေ့ခံစားကာယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်အရာရာသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိလာပါသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ခရစ်တော်ဘုရားက ”ယုံကြည်သောသူတို့၌ ဖြစ်အံ့သောနိမိတ် လက္ခဏာဟူမူကား၊ ငါ၏နာမကိုအမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင့်ထုတ်ပေး ကြလတံ့၊ထူးခြား သောဘာသာစကားမျိုးတို့ကို ပြောကြလတံ့။ မြွေတို့ကို ကိုင်ဖမ်း ကြလတံ့၊သေစေ တတ်သောအဆိပ်အတောက်ကို သောက်စားလျှင် ဘေးဥပါဒ်နှင့် ကင်းလွတ်ကြလတံ့၊ မကျန်းမမာသောသူတို့အပေါ်မှာ ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို တတ်နိုင်သည်”(မာကု ၉း၂၃) ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ တဖန်ထို့ကြောင့် ငါဆိုသည်ကား သင်တို့သည်
ဆုကျေးဇူးကို ရမည်ဟု ယုံကြည်သော စိတ်နှင့် တောင်းသမျှ တို့ကို ရကြလိမ့်မည်”(မာကု ၁၁း၂၄) ဆိုသည်။ဝိညာဉ်ရေးနှင့် ဆိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်၍ တန်ခိုးတော်ကို ခံစားရန်အဘယ်သို့နည်း။ အရာရာထက်ဦးစွာ ကျွန်ုပ်တို့သတိရသင့် သည်ကား ”ထိုလက်နက်အားဖြင့်၊ လူတို့၏ အကြံအစည်တို့ကို¤င်း၊ ဘုရားသခင်ကို သိသောပညာကိုဆီးတားသော မာန်မာနတို့ ကိုလည်းကောင်း၊ နှိမ့်ချမှောက်လှန်၍ ခပ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကို ဖမ်းသွားချုပ်ထားလျက် ခရစ်တော်၏စကားကို နားထောင် စေကြ၏ ”(၂ကော ၁ဝး၅) ဆိုသော ရှင်ပေါလု၏စကားပင်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ် တို့၏သမ္မာတရားနှင့်ဆိုင်သော အသိတရားအလင်းသည် ထင်ရှားစေပြီ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာအားလုံးကို ခဝါချပြီးအထံတော်တွင်နှိမ့်ချ ၍နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အညီ အသက်ရှင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတိအရာ များကို ခဝါချသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ဝိညာဉ်သည် ကြီးထွားရှင်သန်လာကာ ဝိညာဉ် ရေးနှင့်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်ရပေလိမ့်မည်။
ဝိညာဉ်ရေးယုံကြည်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်ပေးသနားသောယုံကြည်ခြင်း၏ အတိုင်း အတာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ (ရော ၁၂း၃) နှုတ်ကပါတ် တော်တရားကိုကြားနာရာမှ ခရစ်တော်အား မိမိ၏ အသက်သခင်အဖြစ်ကိုးကွယ် ချိန်တွင်ယုံကြည်ခြင်း သည် မုံညှင်းစေ့ပမာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားကျောင်းကန် သွားခြင်း၊ကြားနာခြင်း၊ လိုက်လျှောက်ခြင်း၊ ပြုလာသည့်နှင့် အမျှ ကြီးထွားကာ သန့်ရှင်းသူများဖြစ်လာကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုမျှမက ယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားလာ သည်နှင့်အမှာ ယုံကြည်သူတို့မှာ ဖြစ်လတံ့သော နိမိတ်လက္ခဏာ တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာ၌ဝိုင်းရံကာ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသည်။
နာမကျန်းသောသူတို့အတွက် ဆုတောင်းခြင်းပြုရာတွင် ထိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြင့် ဆုတောင်းသမှု ဖြစ်ရမည်။ မဿဲ ၈း၅-၁၃ တွင် တွေ့ရသောတပ်မှူးတွင်ခြေလက် သေနေသောငယ်သားအတွက် ခရစ်တော် ဘုရားထံ ရောက်လာသော အခိုက်သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အညီ ထိုအခိုက်တွင်ပင် ခရစ်တော်၏စကားအတိုင်း ငယ်သားသည် ကျန်းမာခဲ့သည်။
ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် နာမကျန်းသောသူအတွက် ဆုတောင်း ပေးသောအခါ သံသယ မရှိ၊ ရင်ထဲမှာ နှုတ်ကပါတ်တော် အတိုင်း တောင်းဆု ပြုရမည်။
”တောင်းလျှင် ရမည်၊ သို့ရာတွင် တွေးတောခြင်းမရှိဘဲ ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်တောင်းရမည်။တွေးတောခြင်းရှိသောသူသည်ကား၊ လေခတ်၍ လှုပ်ရှားတတ်သော လှိုင်းတံပိုးနှင့်တူ၏။ ထိုသို့သောသူသည် စိတ်နှခွရှိသောသူ ပြုလေသမျှတို့၌ မတည်ကြည်သော သူဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားသခင်၏ လက်တော်မှတစုံတခုကို ရမည်ဟု မထင်မမှတ်စေနှင့် ” (ယာကုပ် ၁း၆-၇)။
ခိုင်ခန့်၊ တည်ကြည်သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးတွင် မေတ္တာတရားဖြင့် နာမ ကျန်းသူများအတွက် ဆုတောင်းပေးခြင်းကို ဘုရားသခင် သည် နှစ်သက်အားရတော် မူပြီးဘုရားသခင်က ကြီးမားသောအမှုကို ပြုတော်မူသည်။ နာမကျန်းခြင်းသည် အပြစ်အကျိုး ဆက် ဖြစ်ပြီး ဘုရားရှင်သည် အနာရောဂါကို ငြိမ်းစေသော အရှင်ဖြစ်သည်(ထွက် ၁၅း၂၆) အားလျော်စွာ အချင်းချင်းပြစ်မှားမိသော အရာများအတွက် ဝန်ချတောင်းပန် ပါက ဘုရားသခင်ထံမှ အပြစ်လွတ်ခြင်းနှင့်အတူကျန်းမာခြင်းကို ပေးတော်မူသည်။
မေတ္တာတရားကိုအရင်းခံ၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းသောအခါတွင် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်သည် ထင်ရှားပြီးဘုန်းတော် ထင်ရှားလာခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ဒိဋ္ဌကိုယ်တွေ့ ခံစားလာကြရမည်ဖြစ်သည်။
သူတော်ကောင်း၏ဆုတောင်းမှု အပိုင်း (၂) တွင်ဆက်ရန်….
ဝန်ခံချက်။ ။ Dr. Jaerock Lee \_ Keeping watch and pray! အားမြန်မာမူပြုပါသည်။
10:39:00 PM Samuel Soe lwin